स्मार्टफोन "Expl पल्सर": समीक्षा। Explay पल्सर: सुविधा र फोटो
गत वर्ष, कम्पनी Explay आफ्नो नयाँ बजेट स्मार्टफोन, रिचार्जिंग बिना लगातार कार्यका लागि डिजाइन गरिएको छ जो संसारमा शुरू। को "Expl पल्सर" को लागि, प्रयोगकर्ता समीक्षा उपकरणको धेरै व्यापक संचार र मल्टिमिडिया क्षमताहरु भन्छन्। यो स्मार्टफोन दुई सिम कार्ड समर्थन र थप अन्य मोबाइल उपकरणहरू चार्ज गर्न संभावना संग सुसज्जित, ब्याट्री सञ्चालन मा एक RECHARGE मोड बिना तीन दिन सामना गर्न सक्छन्। फोन "कहां पल्सर" आफ्नो सबै सद्गुण लागि उचित मूल्य (4500 6000 मा rubles देखि) घरेलू बजार मा पायो। यो मोबाइल उपकरण5इन्च प्रदर्शनमा आरामदायक फिट, दुई क्यामेरा भिडियो मार्फत कुराकानी र आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो क्षण कब्जा गर्न सक्छन् प्रदान गर्दछ। को स्मार्टफोन "Expl पल्सर" विचार, समीक्षा सुरु हुनेछ एक निर्मित स्मृति, यो4छ जीबी, र तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं एक अतिरिक्त कार्ड प्रयोग गरेर यो क्षमता विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं चलचित्र वा संगीत को सम्पूर्ण संग्रह मा एक यात्रा लाग्न सक्छ।
फोन "कहां पल्सर": प्रतिक्रियाहरू पूर्ण सेट
स्मार्टफोन recyclable सामाग्री बनेको र पर्यावरण अनुकूल छ जो एक दफ्ती, मा आपूर्ति। बक्समा उज्यालो-रंग ग्राफिक छवि उपकरण, मोबाइल उपकरण र यसका निर्माता समावेश गर्दछ। भित्र अडान मा सुरक्षा फोम धेरै स्मार्ट र "Expl पल्सर" को लागि आवश्यक घटक केही छ। समीक्षा र प्राविधिक जानकारी पनि समावेश गरिएको छ। किरा एक चार्जर, एडप्टर, केबल, हुन्छन् माइक्रो USB, वारेन्टी कार्ड र प्रयोगकर्ता को मार्गदर्शन। त्यसैले, तपाईं अन्य मोबाइल उपकरणहरूमा आफ्नो फोन जडान गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई चार्ज गर्न।
तपाईँले देखिन्छ Explay पल्सर कुरा भने, प्रयोगकर्ता समीक्षा यसको massiveness र खुरदरापन ध्यान आकर्षित। यो सुरुचिपूर्ण कल गर्न साँच्चै कठिन छ। मोबाइल उपकरण एक शक्तिशाली ब्याट्री छ, त्यसैले यसको मोटाइ 12 मिमी छ। यो मूल्य श्रेणी मा अन्य स्मार्टफोन तुलना गर्न सकिन्छ रूपमा डिजाइन, कम्पनी Explay देखि बजेट स्मार्टफोन को अघिल्लो मोडेल जस्तो। एक पाँच इन्च स्क्रिन पूर्ण ग्लास ढाकिएको छ मामला थोडा उपकरणको कुनामा गोलाकार, प्लास्टिक बनेको छ, एक फिर्ता कवर पक्ष यसको rippled सतह पातलो फ्रेम छ हटाउन सकिने छ। अगाडि माथिल्लो प्यानल मा एक छ अगाडि क्यामेरा, सूचक प्रकाश र आवाज वक्ता। संवेदी समारोह कुञ्जीहरू प्रदर्शन को तल सामान्य रूपमा। सही पक्ष अनुहार मा, हामी पावर बटन देख्न र बाँया मा गर्न सक्छन् - भोल्युम नियन्त्रण। को रियर प्यानल केन्द्र कोठामा, अलिकति सारा सतह देखि जारी छ जो मा राखिएको छ, यो चांदी धातु fringed छ। नजिकैको तपाईं फ्लैश र बाह्य वक्ता देख्न सक्छौं। मोबाइल उपकरण राखिएको हेडफोन ज्याक को शीर्ष र मेमोरी कार्ड जडान लागि कनेक्टर। को इयरपस तल्लो अन्त प्यानल छ। यस स्मार्टफोनको पछाडि आवरण गाढा प्लास्टिक, उनको अदृश्य माटो र औंलाहरु बनेको छ। आफ्नो हात मा मोबाइल उपकरण केसिङ एक सानो कागज। तसर्थ, मालिकको कहां पल्सर "अक्सर टिप्पणी दृढ होइन यन्त्र पकड आफ्नो सिफारिस सुरु" हातमा देखि कूद "। , छेउमा प्यानल मा काम भुक्तानी मा विशेष ध्यान तिनीहरूले फिर्ता आवरण भन्दा धेरै घुमाउन किनभने। Ergonomics लागि जाँदा "Expl पल्सर" प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया सबैले चाँडै एक गैर मानक स्थान, स्क्रिन लक र मात्रा बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, कि तर आफ्नो फोनमा सुविधाजनक र आराम सामान्य, काम मा सुझाव। समायोजन बटन समारोह photographing कार्य गर्दछ। उनको उल्टो व्यवस्था एक हात को व्यवस्थापनमा धेरै उपयोगी हुनेछ। शरीर विधानसभा धेरै उच्च गुणवत्ता, स्मार्ट फोन को सतह मा संकुचन squeaks, कुनै backlash र विरूपण फेंकना छैन समयमा छ। को रियर आवरण सजिलै हटाउन सकिन्छ फिर्ता लिन्छ र एक कल बेला वक्ता गल्ति उनको हात राख्न सकिँदैन।
हामी प्रदर्शन, "Expl पल्सर" कुरा भने: यी यसलाई को विशेषताहरु हो: को आईपीएस प्रविधि, संकल्प छ - 480h864 अंक। को minuses को, उल्लेख गर्न सकिँदैन तुरुन्तै कम हेर्ने कोण पनि स्क्रीन भर मोबाइल उपकरण जस्तै प्रवाह छविको थोरै झुकाव संग र रंग विकृत छन्। ग्लास सुरक्षा विशेषताहरू बारे जानकारी उपलब्ध छैन। साथै एक oleophobic कोटिंग। बरु, प्रदर्शन यांत्रिक क्षति विरुद्ध कुनै अतिरिक्त सुरक्षा छ। स्क्रीन पाँच साथ छुवाइहरू सम्म समर्थन गर्दछ, तर संवेदनशीलता खराब छ। जब आफ्नो रंग संतृप्ति र चमक द्वारा विशेषता एक बादल लागेको दिन घर भित्रका वा बाहिर काम, तर तपाईं तस्वीर तत्काल हराउँछ रूपमा, उज्ज्वल सूर्यका काम गर्न सुरु भने। वर्तमान उपकरण सेटिङ चमक समायोजन। को स्मार्टफोन औसत गुणस्तर मा प्रदर्शन, तर यसको लागि दैनिक काम पर्याप्त छ।
यो स्मार्टफोन एन्ड्रोइड 4.4 मा, उत्पादकहरु प्रणाली खोल हस्तक्षेप गर्न निर्णय र यो रूपमा लगभग सबै बाँकी चल्छ। सफ्टवेयर एकदम स्मार्टफोन लागि मानक छ, यो Google सेवाहरू, ब्राउजर, पढाइ कोठा र खेलाडीहरू समावेश छ।
Explay पल्स सुसज्जित 1.3 GHz को क्षमता छ जो ट्रयाक्टर प्रोसेसर MediaTek टन 6582M। को स्मार्टफोन एक ग्राफिकल शक्ति छ रूपमा मोबाइल उपकरण, 512 एमबी र निर्मित4जीबी को एक राम छ। किनभने यो भर्नु धेरै mediocre छ प्रदर्शन ग्याजेट, आफ्नो क्षमता को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ढिलाइ संग स्मार्टफोन स्पर्श प्रतिक्रिया, तर समग्र वैश्विक जम्छ र दुर्घटनाहरू अवलोकन थिएनन् प्रणाली। मोबाइल उपकरण गुणात्मक यो चलचित्र वा टिभी शो हेर्न एकदम सम्भव छ, HD गुणवत्ता मा भिडियो reproduces, र यसको पाँच इन्च स्क्रिन दिइएको। मात्र drawback माथिको-उल्लेख कोण, उज्ज्वल प्रकाश र साना मा रंग प्रजनन छ स्क्रिन रिजोलुसन। जब इन्टरनेट र मापन अनुभव थोरै ढिलाइ मा flipping पृष्ठ। यो स्मार्टफोन गम्भीर गेमिङ लागि उपयुक्त छैन। तर यसको प्रदर्शन त कम छ। केही खेल राम्रो सामना गर्न ग्याजेट संग, गंभीर अनुप्रयोगमा तर सजिलै देखिने ढिलाइ र ढिलो लोड प्रकट गर्नुभयो। बाह्य वक्ता पनि कम दर मा, चर्को पर्याप्त र गुणस्तर सुनिन्छ।
5 MN र अगाडि - - 0.3 MN मोबाइल उपकरण कोठामा छ। मुख्य खराब अवस्था शूटिंग मा उपयोगी हुने एक फ्लैश, छ। क्यामेरा आवेदन यसको कार्यक्षमता खुसी छैन। "Expl पल्सर" को काम को यस पक्षलाई सन्दर्भमा प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया प्रणाली अक्सर दुर्घटनाहरू उत्पादन गर्दा, जम्छ, र समाधान गर्न यो, तपाईं स्मार्टफोन पुनः सुरु गर्नुपर्छ भनेर पुष्टि गर्छ। परिणामस्वरूप तस्वीर तिनीहरूले प्रस्तुत हल्ला, धमिलो र विस्तार घटी, अस्पष्ट छन्। धुलो वा गरिब कवरेज संग एक कोठा मा जब शूटिंग विशेष यस दोष प्रकट भएको छ। राति, चित्र लिन र किनभने प्राप्त फोटो भयानक गुणस्तर को सिफारिस गरिएको छैन। डेलाईट मा, तस्वीर पर्याप्त गुणवत्ता को हो, तर कहिले काँही छविमा केही blueness प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल एकाइ एक पैन समारोह संग सुसज्जित छ, तर म्याक्रो गर्दैन। यो स्मार्टफोन पनि3जीपी ढाँचामा खेलिन्छ भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ। भिडियो गुणस्तर एकदम उत्तेजित गर्दछ भने, ध्वनि हामी लगभग अविवेच्य किनभने, समस्या हुन सक्छ।
स्मार्टफोन तपाईंले तिनीहरूलाई को एक सामान्य हो, दुई सिम कार्ड संग साथ काम गर्न अनुमति दिन्छ, र अन्य मात्र माइक्रो ढाँचा समर्थन गर्दछ। मोबाइल उपकरण सधैं राम्रो कायम छन् वायरलेस नेटवर्क संग काम को समारोह प्रदान गर्दछ। यो स्मार्टफोन राम्रो ब्याट्री रिचार्जिंग बिना लामो अवधि सामना गर्न सक्षम छ, किनभने एक नेभिगेटर रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ब्याट्री एक 4000 mAh ब्याट्री समावेश गर्छ, यो एक शुल्क पकड आफ्नो क्षमता असर गर्छ। यो समर्थन एक कम शक्ति प्रोसेसर र एक सानो स्क्रीन संकल्प गर्दछ। भिडियो ब्याट्री हेर्दै गर्दा लगातार सञ्चालनको बारेमा 10 घण्टा पर्याप्त छ।
स्ट्यान्डबाइ मोड मा, स्मार्टफोन एकदम रिचार्जिंग बिना एक हप्ताको बाँच्न सक्षम छ, र ब्याट्री को सक्रिय प्रयोग 2-3 दिन को लागि पछिल्लो हुनेछ। ती प्रयोगकर्ताहरूको रेकर्ड विनिर्देशों संग उत्कृष्ट ब्याट्री संग एक उपकरण र आवश्यकता लागि दूत।
स्मार्टफोन Samsung Galaxy A5 SM-A500F: समीक्षा, समीक्षा, विनिर्देशों र वर्णन
QUMO क्वेस्ट 507: एक सिंहावलोकन, समीक्षा, सुविधाहरू
"नोकिया C7": फोन र समीक्षा
गाउँमा मा गर्मी मा के गर्न? आराम!
त्यहाँ कसरी कागज बाहिर एक रकेट बनाउन बारेमा जटिल केही छ!
रबिन Gudov लागि गाइड - घरमा क्रसबो कसरी बनाउने
गोंद जस्तै आफ्नो नङ मा पर्चा? नङ लागि पर्चा कसरी प्रयोग गर्ने
ऊफा। आकर्षण: वास्तु भवन र स्मारक